[APK] Port MIUI Xiaomi Igwefoto niile Android loa | Gam akporosis
[Ngwa] Port MIUI Igwefoto
Anyị na-eweghachite otu n'ime ihe ndị ahụ ndị ọrụ nke sistemụ arụmọrụ gam akporo dị ka nke ukwuu, ọ karịrị karịa igosipụta na anyị hụrụ n'anya ịnwale ngwa nke anyị site na ụdị na ụdị ndị ọzọ nke gam akporo.
Ọ bụ ya mere taa na ekele otu onye so na nnukwu Androidsis obodo na Telegram, enyi Gwunye nke atọ na taa anyị ga-eso gị niile kerịta a ọdụ ụgbọ mmiri nke ngwa igwefoto mbụ nke Xiaomi ọnụka anyị gaa a MIUI igwefoto ngwa ngwa dakọtara na ndị ọzọ na ụdị nke gam akporo ngwaọrụ.
Oge a ka enwe ike budata igwefoto MIUI ngwa ma wụnye ya na njedebe gam akporo gị, ị ga-enwe naanị tinye Androidsis obodo na Telegram site na ịpị njikọ ndị a ma chọọ faịlụ otu dị ka m na-egosi gị na mmasị video, ma ọ bụ emezue nke ahụ, rịọ maka MIUI igwefoto ngwa nke mere na onye ọrụ ọ bụla nke obodo nwere ike iji obiọma nyefee gị ngwa ahụ a kpọtụrụ aha.
Ozugbo ebudatara ngwa ahụ, ihe ị ga - eme bụ nwee site na ntọala nke gam akporo anyị na ngalaba Nche, nhọrọ nke ga - enyere anyị aka ịwụnye ngwa ebudatara na mpụga na Playlọ Ahịa Google, nhọrọ nke bịara mara dị ka nke mee ka amaghi ama ma obu ngwa ndi amaghi ama.
APK nke akọrọ na Androidsis Community na Telegram nke Engel Tercero
Opekempe achọrọ nke gam akporo sitere na gam akporo 4.2 n'ihu, yabụ na anyị nwere ike ịgba mbọ hụ na ọ bara uru maka ụdị gam akporo ọ bụla taa, belụsọ ndị niile aha ngwugwu na-akpata ụdị esemokwu na ntinye ngwa ahụ.
Naanị site na ime nhọrọ a, ị ga-enwe ike ịwụnye nke a MIUI igwefoto ngwa ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ ngwa ọ bụla ọzọ ị na-ebudata na ngwa ngwa aka.
Ma MIUI igwefoto ngwa nke enyi Engel Nke atọ na-akọrọ, Ọ bụ ngwa nke ihe ọ bụla ọ na-enye anyị, ma ọ dịkarịa ala na njedebe m nwalere ya, na LG G6 na Huawei P20 PRO, na-arụ ọrụ dịka o kwesiri, ngwa ngwa na nke ọma na-enweghị mmanye mmechi ma ọ bụ malfunctions ọ bụla nke arụmọrụ ma ọ bụ nhọrọ ọ na-enye anyị.
Nke ahụ bụ, otu ihe m ga-ekwukwa na nke ahụ abụghị na ọ dị anya Ngwa igwefoto a enweghị ọkara nke arụmọrụ ndị ọhụrụ nke ngwa ngwa igwefoto Xiaomi nyere na ọnụ dị ka Xiaomi Mi6. ọbụna ya na dị ka ịmata ihe ma ọ bụ n’ihi na ọ na-arụ ọrụ ọfụma, ọ nwere ike ịbụ nhọrọ dị oke mma iji dochie igwefoto mbụ nke ọtụtụ ọnụ ala na ọnụ ala gam akporo ọnụ.
Na vidiyo m hapụrụ na mmalite nke post, na isi ya, m na-egosi gị n'ụzọ zuru ezu ihe niile ngwa igwefoto MIUI a na-enye anyị, yabụ ana m enye gị ndụmọdụ ka ị lelee anya tupu ibudata ma wụnye nke ngwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » [Ngwa] Port MIUI Igwefoto
The Moto G5 na G5 Plus na-amalite na-enweta gam akporo Oreo